I-Apple TV + iqikelelwa ukuba sele idlulile kubabhalisi abazizigidi ezingama-40 | Ndisuka mac
I-Apple TV + iqikelelwa ukuba sele idlulile kubabhalisi abazizigidi ezingama-40
Uqikelelo lwenani lababhalisi iApple TV + elinokuba lipapashiwe, kwaye balibeka kumfanekiso ogqitha 40 izigidi ngasekupheleni konyaka ophelileyo. Kum ngokunyanisekileyo babonakala bambalwa, bambalwa kakhulu.
Zimbalwa inkampani ezineebhiliyoni ze-iPhones ezisebenzayo kwiplanethi. Isigidi esinye sabasebenzisi beApple, ekubukelwe kubo ama-40 kuphela Apple TV +. Kwaye ndiqinisekile ukuba kwabo babhalisele eqongeni, uninzi lwabo lusenonyuso lwasimahla olusebenzayo ukuba uthenge isixhobo esitsha kule minyaka mibini idlulileyo.
Ngokwengxelo epapashwe ngu Newsweek, Uhlalutyo lweAmpareInkampani egxile kuhlalutyo lwentengiso, iqikelela ukuba ababhalisile kwinkonzo yevidiyo yokusasaza iApple banokuba bedlulile kwizigidi ezingama-40 ngasekupheleni kuka-2020. Oku kungabonisa ukukhula kwabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-6 xa kuthelekiswa namanani e-2019.
Ingxelo ikwaqwalasele ukuba, ngokophando lwakutsha nje lwe Ezahlukahlukeneyo, ukuya kuthi ga kwisithathu kwisihlanu sababhalisi be-Apple TV + bayaqhubeka nokufumana inkonzo simahla, enkosi ngokunyusa kuka-Apple unyaka simahla kwiqonga lakhe ukuba uthenga isixhobo esitsha.
I-Apple TV + ayityhilanga ukuba liyintoni inani lababhalisi abakhoyo ngoku, kodwa ngokutsho kohlalutyo lwe-Ampere, iqonga lalinalo 33,6 izigidi Abasebenzisi ekupheleni kuka-2019, kwaye kuqikelelwa ukuba bekungafikelela kwizigidi ezingama-40 ukuphela kuka-2020.
Uninzi lwababhalisi bakho bahlala bengabhatalwanga
Olu konyuka kwinani lababhalisi licaciswa yinto yokuba iApple nika unyaka I-Apple TV + ngokuthengwa kwezixhobo ezintsha. Kubalwa ukuba ngaphezulu kwesithathu kwisihlanu semirhumo ayihlawuli le nkonzo.
Kunzima ukwazi ngokuthe ngqo ukuba olu qikelelo luchanekile na okanye hayi. U-Apple akaze alichaze elona nani lilodwa lababhalisi kuyo nayiphi na inkonzo yakhe njenge-Apple TV +, Apple Music, okanye iApple Arcade. Nangona kunjalo, kutshanje kutyhilwe ukuba inkampani igqithile kwi 660 izigidi yemirhumo ehlawulwayo yongeza zonke iinkonzo zabo.
Ngamafutshane, ukuba amanani ayinyani kwaye i-Apple TV + inababhalisi abangaphezulu nje kwezigidi ezingama-40 (abahlawulayo okanye abangahlawuli), isekude emva kwezi zibini zikhulu, Disney + y Netflix, abadlulise i-100 yezigidi kunye ne-200 yezigidi ababhalisile, ngokwahlukeneyo, kwaye ezi ziyahlawulwa, nangona ezinye iiakhawunti zeNetflix zabelwana ngazo. Ngelo xesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-Apple TV + iqikelelwa ukuba sele idlulile kubabhalisi abazizigidi ezingama-40
Isiphelo esiphakamileyo seMacBook Pro sigqityiwe yiPad Pro entsha ngeM1
Isitokhwe seAirTag kwiVenkile yeApple siyazinza